Antony fototra 14 mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana: antony iraisana amin'ny fisarahana - Fifandraisana
Antony fototra 14 mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana: antony iraisana amin'ny fisarahana
Tsy ny fifandraisana am-pitiavana rehetra maharitra mandrakizay. Raha ny marina, ny maro an'isa tsy.
Tsy tokony hikapoka ny tenantsika momba ny fifandraisana efa nifarana isika, satria ny fifandraisana tsy mahomby dia tsy midika hoe tsy nahomby isika.
Ny fifandraisana rehetra ananantsika dia mamolavola sy mampianatra antsika, noho izany dia fahombiazana amin'ny fombany avy.
Tsy afaka mifehy ny ho avy ianao. Tsy ny fifandraisana rehetra misy aminao no ho voatendry haharitra mandrakizay, fa mety hahagaga ry zareo raha maharitra.
Fa raha manonofy ianao ny hanana fifandraisana izay mizaka ny fisedrana ny fotoana ary maharitra mandrakizay sy iray andro, dia mety ho ilaina ny mahatakatra ny antony lehibe mahatonga ny ankamaroan'ny fifandraisana mifarana.
Ny fahafantaranao ireo dia afaka manampy anao hahita marika fampitandremana mialoha, mba hahafahanao manandrana mametaka lavaka ao anaty fiarahana izay mety milentika raha tsy izany, na mety tsy hiditra amina fifandraisana izay mety ho vetivety, ary mety hamonjy ny tenanao alahelo sasany amin'ny ho avy.
ny fiaramanidina mitaingina avy any amin'ny afobe
Ireto ny sasany amin'ireo antony lehibe sy lehibe tsy ahombiazan'ny fifandraisana.
1. Tsy mifanaraka amin'izany fotsiny ianao.
Rehefa mandeha ny taona dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fiarahana ianao, zavatra toa tsy dia misy dikany na mahasosotra sy manintona anao aza rehefa nifankatia voalohany ianao dia mety ho lasa triatra amin'ny fototra.
Raha ny toetranao sy ny toetranao dia tsy mifanaraka amin'ny iray hafa , azonao atao ny manomboka mampifaly ny tsirairay.
Mazava ho azy fa tsy midika izany fa mila manana toetra mitovy amin'izany ianao.
Fantatsika rehetra fa ny mifanohitra amin'izany indraindray manintona, ary mety hiasa tsara izany, raha ohatra, ny iray aminareo amin'ny ankapobeny milamina kokoa ary ny iray milamina kokoa. Na ny iray manosika anao kokoa ary ny iray kosa mikasa handinika tsara.
Raha mifameno ianareo dia mety ho lasa tanjaka ny tsy fitoviana.
Saingy indraindray ny fahasamihafana eo amin'ny toetranao dia mety hidika fa tsy afaka mifanaiky na inona na inona ianao na mifikitra amin'ny hozatrao tsy tapaka. Midika izany fa mijery ny fiainana amin'ny fomba fijery hafa tanteraka ianao, ary miady mafy hahatakatra ny fihetsika na fomba fiasa amin'ny vadinao.
Tsikelikely, ireo triatra ireo dia mety hivadika ho vava volkano, ary amin'ny farany dia rava ny fifandraisana.
2. Samy manana ny tanjon'ny fiainanao ianao.
Angamba ny toetranao manokana dia mitovy, fa izay tadiavinao amin'ny fiainana dia mbola hafa tanteraka.
Ny tanjonao amin'ny fiainana, na ny laharam-pahamehanao, no zavatra tena ilainao itoviana amin'ny vadinao raha toa ka hijanona maharitra ianareo roa.
Ohatra, angamba te-hivezivezy izy ireo, na handany fotoana maharitra hipetrahana any ivelany, ary ny laharam-pahamehanao dia ny manakaiky ny fianakavianao.
Angamba mifantoka amin'ny fitadiavam-bola izy ireo, fa ny vola fotsiny no jerenao ho toy ny fitaovana hahazoana tanjona fa tsy tanjona.
Angamba te hanambady ianao, ary tsy manao izany ry zareo . Angamba mila ankizy izy ireo, fa tsy tianao.
Raha manana fahatsapana mahery vaika amin'ny zavatra tadiavinao amin'ny fiainana ianao ary tsy mizara azy ny vadinao, dia mety hanoratra ny faran'ny fifandraisanao izany.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny mazava momba ny laharam-pahamehanao sy ny firesahana ireo zavatra ireo dieny mbola kely, mba tsy hisy tsy ampoizina tsy ampoizina eto an-toerana.
Raha hitanao fa samy manana tanjona kendrena fiainana izy roa, dia mila mieritreritra tsara ianao na tsia mpamadika fifanarahana ho anao.
Aza miditra amin'ny banky fifandraisana amin'ny zava-misy fa ho afaka hanova ny sain'izy ireo momba ny zavatra iray ianao raha fantatrao fa tsy vonona ny hanova ny anao ianao.
3. Manana fitsipika hafa ianao.
Matetika ity dia zavatra hitan'ny olona raha vao mahafantatra olona vaovao izy ireo, saingy mety hahagaga anao izany indraindray rehefa efa manolo-tena amin'ny fifandraisana ianao.
Tsy olana ho an'ny rehetra izany matetika, fa mety hiteraka fisarahana lalina.
Ohatra, raha tsy mitovy ny finoanao politika matanjaka, mety ho hitanao fa be loatra ny fotoam-pifidianana na ny toe-draharaha politika mampiady hevitra, satria tsy azonao atao ny misorona ny loha-hevitr'izy ireo.
Ary raha manana finoana matanjaka na etika matanjaka tokoa ny iray aminareo, dia mety samy hiady mafy ianareo hifankalala.
seho miresaka snl barry gibb
Mety hipoitra ihany koa ny olana raha manomboka mieritreritra ny hanan-janaka ianao ary mahatsapa fa tsy afaka mifanaraka amin'ny fototry ny fomba fitaizana azy ireo.
Indraindray ny fitsipiky ny olona dia mety miova amin'ny fomba ifotony indrindra mandritra ny taona maro na mihoatra, ary ny fifandonana izay antony io dia mety ho antony tsy fahombiazan'ny fifandraisana.
4. Tsy mifampatoky ianareo.
Indraindray, izany dia mety ho vokatry ny zavatra nitranga taloha mba hanasarotra ny fahatokisan'ny iray aminareo.
Matetika anefa dia tapaka ny fifandraisana satria ny mpivady iray manapaka ny fatoram-pitokisana, ary na miezaka mafy toy inona aza izy ireo dia tsy afaka manasitrana izany fatorana izany ny mpivady.
Amin'ny tranga maro, ny tsy fivadihana eo amin'ny lahy sy ny vavy no manimba na manimba ny fifampitokisana eo amin'ny olona roa. Nefa misy zavatra maro hafa izay mety hanimba ny finoanao ny vadinao.
Angamba hitanao fa nandainga taminao momba ny lasa izy ireo, na lasa ao aorianao, na mitazona fampahalalana ara-bola manan-danja aminao… na noho ny fahatsapanao ho meloka na noho ny tahotra.
Raha nisafidy ny hanangana ny fiainanao amin'ny olona iray ianao, dia manan-jo hahafantatra momba ny zavatra sasany, ary ny fahafantarana fa mitazona anao ao anaty haizina izy ireo dia mety hidika fa tsy afaka hametraka ny finoanao azy ireo intsony ianao. Indrindra rehefa nametraka ny loza amin'ny hoavinao izy ireo na ny fiarovana anao.
Mpivady marobe no mahavita miasa amin'ny tsy fivadihana na famadihana ary manangana fitokisana indray, saingy tsy mora ny manao azy. Ary ny tsy fahampian'ny fahatokisana no antony lehibe mahatonga ny fifandraisana tsy mahomby.
5. Tsy mifankatia ianareo.
Rehefa mandeha ny taona dia miova sy mivoatra ny fitiavana.
Ny fitiavana mientanentana tsapanao fony vao nifanena tamina olona iray ianao dia mety hanomboka ho faty, fa tokony hosoloina fitiavana lalina sy fitiavana mafy orina an'ilay olona nofidinao handany ny fiainanao.
Fa indraindray, ny fitiavana dia mety hanjavona tanteraka. Mety misy ny catalyst izay mahatonga anao hifampijery amin'ny fomba hafa, na mety tsy ho fitiavana tsy misy antony manokana.
RAHA ny fitiavana efa nanjavona raha mifanaraka aminy manokana, dia mety ho sarotra ny hanaiky fa efa nihazakazaka ny fifandraisana, saingy tsy tokony hisy olona miaina tsy misy fitiavana amin'ny fiainany.
6. Matahotra ny iray na ianareo roa.
Mampatahotra ny fifandraisana maharitra sy matotra. Mety hatahotra ny fanoloran-tena izay tonga eo aminao, fa matetika ny tahotra sao haratra.
helo amin'ny tapakila sela 2016
Raharaha lehibe rahateo ny fananana fifandraisana. Mametraka tanteraka ny fitokisanao amin'ny olon-kafa ianao ary mamela azy ireo handrava ny rindrina rehetra izay naorinao tamim-pitandremana.
Loza ny fianjerana amin'ny fitiavana. Satria mety hisy zavatra hitranga.
Afaka nandao anao ry zareo, na nisy zavatra nanjo azy ireo. Tsy fantatsika velively izay miandry eo an-jorony, ary ny vintana dia izany ny fitiavana dia hanaintaina antsika ary koa mitondra fifaliana ho antsika.
Tsy tokony hiaina ny tahotra antsika eo amin'ny toeran'ny mpamily velively isika, fa raha mifarana ny fifandraisana, dia mety hitranga satria ny iray na ny mpiara-miombon'antoka dia tsy naharesy ny tahotra.
7. Ny iray aminareo roa dia mandalo krizy.
Indraindray, na firy na firy ny olona mifankatia, dia misy zavatra mety hitranga amin'ny fiainana manelanelana azy ireo.
Raha mandalo krizy ara-pihetseham-po, manokana, matihanina, na ara-bola ny iray na izy roa, dia mety be loatra ny fihenan'ny fifandraisana indraindray.
Noho izany, tadidio fa tsy olana ifotony foana amin'ny fifandraisana mihitsy no mety hiafara amin'ny fiafarany.
Olombelona ihany isika, ary indraindray, ny fitiavana tsapantsika amin'ny olon-kafa fotsiny dia tsy afaka miaina amin'ny toe-javatra mampivadi-po.
8. Mihalehibe ianareo.
Amin'ny maha-olombelona antsika dia ao anaty fivoarana tsy tapaka isika rehetra. Tianay ny mihevitra ny tenanay ho toy ny entona raikitra, fa miova foana izahay, mihalehibe ary mivoatra hatrany rehefa mandeha ny taona.
Mamolavola antsika ny zavatra niainantsika sy ny olona mifanena aminay. Ary mety ho sarotra izany raha resaka fifandraisana.
Ny olona ankehitriny dia mety tsy hitovizanao amin'ilay olona nifanena taminao, ary mety ho nandalo fiovana mahery vaika koa izy ireo.
Tsy olana foana izany. Mety hiara-maniry sy miroborobo ianao, mifanampy ary mianatra zava-baovao momba ilay olona iray hafa isan'andro.
Saingy mety hihalehibe ianao, hampivelatra ny fahalianana, fitsipika, laharam-pahamehana, tanjona samihafa…
Na dia tonga lafatra toy inona aza ianareo ho an'ny tsirairay rehefa nihaona, tsy misy antoka azo antoka fa hijanona ho toy izany mandrakizay ianao.
9. Ny iray na ianareo samy manana zavatra tsy ampoizina ho an'ny iray hafa.
Misy zavatra sasantsasany azontsika antenaina tsara amin'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika - ny fahitsiana, ny fahamendrehana, ny fanajana… na dia ny zavatra kely aza toa ny fampahafantarana antsika rehefa tara mody izy ireo.
Saingy misy zavatra maro ihany izay tsy azo antenaina hantenaina amin'ny vadintsika.
Rehefa manantena zavatra hatao amin'ny alalanao ianao ary ny lalanao ihany dia niampita ho amin'ny fitondran-tena mifehy ianao.
Tsy misy olona afaka miaina mifanaraka amin'ny fenitrao manokana na manao zavatra araka izay itiavanao azy ireo hatao isaky ny mandeha. Ary izany dia hitarika fahadisoam-panantenana sasany avy aminao.
Inona koa, ny sakaizanao dia mety hahatsapa lolompo anao satria toa tadiavinao ny manova azy ireo ho amin'ity fahitana fahalavorariana tsy azo tratrarina ity.
Amin'ny farany, hipoaka ny fahadisoam-panantenanao sy ny lolom-poo, ary ny sisa tavela dia vava mandoro mirehitra izay nisy ny fifandraisana taloha.
10. Tia tena ny iray aminareo.
Ny fifandraisana salama dia fiaraha-miasa - mety tsy mitovy tanteraka amin'ny fotoana rehetra, fa akaiky.
Raha tia tena anefa ianao na ny vadinao, dia hanimba ny fifandraisan'ny mpivady izany.
Ny fitiavan-tena dia mety ho mpiara-miasa iray izay tsy misarika ny lanjan'izy ireo amin'ny andraikitra azo ampiharina amin'ny fitantanana tokantrano sy fiainana.
Mety hiseho izany fa tsy mametraka ny filan'ilay olona ho loha laharana mihitsy, na dia iharan'ny tsindry sy adin-tsaina amin'ny faritra hafa amin'ny fiainany aza izy ireo
Mety ho fandavana ny tsy hanaiky lembenana amin'ny safidy atao miaraka sy miziriziry mitady ny tianao haleha.
ahoana no nahafatesan'i eddie guerrero
Amin'ny alàlan'ny fitondran-tenany, ny olona tia tena dia mampiseho amin'ny mpiara-miasa aminy fa kely dia kely ny lanja apetrany amin'izy ireo, ary izany dia mety hitarika barazy mahafaty eo anelanelanao.
11. Tsy mifanaja ianareo.
Ny fanajana dia zavatra asehontsika amin'ny ankamaroan'ny zavatra ataontsika. Fa indraindray tsy ny fanajana no asehontsika, fa ny tsy fanajana. Ary rehefa tsy eo ny fanajana dia tsy salama ny fiarahana.
Ankehitriny, ny mpivady sasany dia mety hahavita hijanona miaraka na dia tsy misy fanajana ny iray na ny roa na ny mpivady (ary mampiseho an'io), saingy tsy ho sambatra izany fifandraisana izany.
Azo inoana kokoa fa ilay olona mahatsiaro ho tsy voahaja dia hikatsaka ny hivoaka ny fifandraisana raha tsy mahita fanatsarana ny toe-javatra aorian'ny resahany izany.
Ny tsy fanajana dia misy poizina ary afaka mivoaka mora foana any anaty rano manararaotra raha avela hitohy tsy misy fanamby ny fihetsika tsy manaja.
12. Tsy afaka mifampiresaka tsara ianareo.
Ny fifandraisana tsara dia manamafy ny fifandraisana salama. Miara-miasa izy ireo. Tsy afaka tena hanana fifandraisana salama ianao raha tsy manana fahaiza-manao mifampiresaka.
Fa maninona Satria manakaiky ny fiheveranao ny tenanao dia misy olona roa miavaka izay tsy afaka mamaky ny sain'ny tsirairay na mahatsapa izay tsapany ny mpivady.
Ny teny no lakan-drano mankany amin'ny mpiara-miasa amintsika ny eritreritsika sy ny fahatsapantsika. Ary rehefa tsy afaka mifampiresaka mahomby isika dia tsy afaka maneho izay tiantsika sy ilaintsika.
Ny tsy fifankahazoan-kevitra na ny tsy fisian'ny serasera dia mitarika amin'ny tsy fahatakaran-javatra, ny fahatsapana maharary ary amin'ny farany dia mifanipaka.
Rehefa tapaka tanteraka ny lalan'ny serasera dia tsy maharitra maharitra ny fifandraisana. Ny iray na izy roa mpiara-miasa dia hisintona ny plug.
13. Samy mifanome tsiny amin'ny zavatra rehetra ianareo.
Rehefa misy zava-mitranga izay tsy tokony nitranga, na rehefa tsy mitovy amin'ny fomba tianao ny dia an'iza izany?
Raha ny valin'ny fanontanianao dia ny vadinao foana no diso, misy lesoka lehibe amin'ny fototry ny fifandraisanao.
Rahoviana ny mpiara-miasa dia mifanome tsiny amin'ny zavatra rehetra , mitarika fahatezerana, fahasosorana, lolom-po ary fihetseham-po sarotra maro hafa.
Ireo fahatsapana ireo dia manala ny tsara rehetra mety misy eo amin'ny fifandraisana mandra-pahatongan'ny sisa sy ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana.
Tsy afaka manana fifandraisana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana tsotra fotsiny ianao amin'izay misy ny rantsantananao omena tsiny mifikitra mafy amin'ny vadinao. Samy mila miantsoroka andraikitra amin'ny hetsika ataonao sy ny fihetsikao ara-tsaina amin'ny fihetsiky ny hafa ianareo roa.
ny fomba hahatongavana ho mahaliana kokoa ny olona
14. Ny iray aminareo dia mitana lolompo.
Hisy ny fotoana amin'ny fifandraisana rehetra izay mahasosotra ny iray ny hafa. Mety hitranga tsy tapaka io, na matetika, fa hitranga.
Ny famelan-keloka dia fitaovana lehibe toy izany amin'ny fitazonana ny fifandraisana. Raha tsy afaka mifamela heloka ianao amin'ireo fotoana izay misy ny sisin-tany iray ka miteraka fanaintainana, ahoana no ahafahanao manantena ny hifankatia sy hifanaja ary hifampatoky?
Satria hitanao fa poizina amin'ny fiarahana ny lolompo. Mety poizina miadana izy io, nefa miteraka fahafatesan'izay rehetra tsara momba ny fifandraisana.
Ary rehefa mitranga izany dia maty antoka ny fiarahana.
Aza adino: ny fifandraisana dia mety tsy nahomby, saingy tsy nanao izany ianao.
Amin'ny maha-fiarahamonina antsika, dia mazàna mijery ireo fifandraisana rehetra izay miafara amin'ny tsy fahombiazana isika. Rehefa, raha ny tena izy, ny fifandraisana sasany dia tsy natao haharitra mandrakizay.
Afaka miditra amin'ny fiainantsika mandritra ny fotoana fohy ny olona ary manome antsika fitiavana sy fahasambarana, mandra-pahatongan'ny fotoana handrosoana.
Ny zava-dehibe tokony hotadidina dia ny fifandraisana tsy nahomby dia tsy midika hoe nahomby ianao. Na ahoana na ahoana.
Ny zava-misy hoe tsy vitanao ny mitazona ny fifandraisana raha tsy izany intsony no mety ho anao roa dia tsy misy taratra aminao amin'ny maha-olona anao, na ny lanjanao.
Misy fitiavana lehibe lavitra noho ianao tsy azonao eritreretina. Miandrasa fotsiny dia jereo.
Mieritreritra ny hampitsahatra ny fifandraisanareo sa efa nandia fisarahana? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Torohevitra 11 hialana amin'ny fifandraisana tsy misy fanidiana
Fanontaniana 17 hanampy anao hanapa-kevitra raha hijanona amin'ny fifandraisanao
Famantarana 16 mampalahelo fa very liana aminao sy ny fifandraisanao izy
25 Tsy misy Bullsh * t manasonia ny vadinao tsy tia anao intsony
Ahoana ny fomba hampitsaharana fifandraisana maharitra: toro-hevitra 11 hisarahana fisarahana tsara
Ahoana no hampijanonana ny fitiavako olona tsy tia anao hiverina
ny fomba hahatongavana olon-dehibe matotra
zavatra azonao atao rehefa mankaleo
inona no holazaina amin'ny namana namadika anao
garth brooks nanambady an'i trisha yearwood
inona no irinao hahatongavana
mandeha ny fifadian-kanina ao amin'ny fifandraisana